२० गते घर आउँदैछु भनेर आमालाई फोन गरेका घले मलेसियामै यसरी अस्ताएपछि आमाको बेहाल! – PathivaraOnline
Home > प्रवास > २० गते घर आउँदैछु भनेर आमालाई फोन गरेका घले मलेसियामै यसरी अस्ताएपछि आमाको बेहाल!
२० गते घर आउँदैछु भनेर आमालाई फोन गरेका घले मलेसियामै यसरी अस्ताएपछि आमाको बेहाल!
admin February 24, 2020 February 24, 2020 प्रवास	0
मलेसिया । मलेसियामा रहनुहुने सम्पुर्ण दाजुभाई दिदिबहिनी साबधान रहनु होला । यो घटनाले सम्पुर्ण नेपालीहरुको मन रोएको छ। धन कमाएर आफ्नो परिवारलाई खुसी दिलाउछु भनेर बिदेसिएका आफ्ना छोरा रातो बाकसमा फर्कदै गर्दा त्यो आमाको मनमा कति बज्रपात परिरहेको होला। कति सपना बोकेर मलेसिया गएका धादिङ्गका बिबस घले २० गते घर आउदैछु भनेर आफ्नी आमालाई फोन गरेर भनेका थिए । तर आमाको छोरा हेर्ने सपना अधुरै रह्यो ।
नेपाल फर्कने खुशीमा अनेक तानामाना बुन्दै बसेका घलेले बिसादी मदिरा अन्जानमा उस्को भागमा पर्न गयो । त्यो कुरा उस्लाई के थाहा कि यो मदिरा नक्कली हो भनेर । तर त्यो न’क्कली र’क्सीले बिबस लगयत अहिलेसम्म सात नेपाली दाजु भाईको ज्यान गएको छ । र’क्सीमा कसरी वि’षादी मिसिएको थियो भन्ने बारे अन्जान रहे पनि यस्तो र’क्सी अब नपिउनु होला जनचेतनाको लागि सग्दो (share ) गर्नुहोला।
बिषादीयुक्त किङ्गफिसर नक्कली बियर
स्यावास नेपाली आर्मी! लेवननमा यसरी नाम कमाएर प्रसंशा पाएपछि…